အမှတ်အသားများ (Tags): လူမီနီယံပရိုဖိုင်းကိုထုတ်လုပ်သူ, လူမီနီယံပရိုဖိုင်းကိုပေးသွင်း, Aluminum profiles, စက်မှုလူမီနီယံ profile များကို
အမှတ်အသားများ (Tags): လူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းကို, လူမီနီယံပရိုဖိုင်းကိုပေးသွင်း, စက်မှုအလူမီနီယံပရိုဖိုင်းကို
Industrial aluminum profile is an indispensable basic raw material in the national economy and is widely used in construction, packaging, transportation, power and other fields. Since the founding of New China for more than 60 နှစ်ပေါင်း, from exploration, mining, smelting to processing, China's industry has complete upstream and downstream industries,…
အမှတ်အသားများ (Tags): aluminum alloy fence, aluminum alloy guardrail, aluminum fence, aluminum guradrail, လူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းကို
အမှတ်အသားများ (Tags): လူမီနီယမ် extrusion ပရိုဖိုင်း, Aluminium profile, စက်မှုအလူမီနီယံပရိုဖိုင်းကို
(1) ကဗျာ, aluminum profiles have been introduced into aluminum alloy doors and windows in the 1950s, and are stillacommonly used surface treatment measure for aluminum doors and windows; (2) Electrophoretic acrylic resin after anodizing, which has been commercialized in Japan in the 1960s and started to be used…
အပူစုပ်လူမီနီယံ extrusion ကဘာလဲ
အမှတ်အသားများ (Tags): လူမီနီယံ extrusion, လူမီနီယံ extrusion ပရိုဖိုင်းကို, လူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းကို, စက်မှုအလူမီနီယံပရိုဖိုင်းကို
အလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်း radiator ကိုလည်း radiator လူမီနီယံပရိုဖိုင်းကိုသို့မဟုတ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလူမီနီယံပရိုဖိုင်းဟုခေါ်သည်. လူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းကိုရေဒီယိုလှပသောအသွင်အပြင်၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်, အလေးချိန်ပေါ့, ကောင်းသောအပူလွန်ကျူးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကောင်းသောစွမ်းအင်ချွေတာအကျိုးသက်ရောက်မှု. ပြုပြင်ထားသောအလူမီနီယမ်အပူစုပ်၏မျက်နှာပြင်သည်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်မျက်နှာပြင်ကုသမှုအတွက် anodized ပြုလုပ်ထားသည်။
အမှတ်အသားများ (Tags): aluminum alloy shutters, Aluminum Alloy Shutters Manufacturer, Aluminum Alloy Shutters Supplier
Many home decoration now choose aluminum alloy shutters when choosing door and window products, which are not only beautiful and generous, but also sturdy and durable, which is loved by the majority of owners. သို့သော်, it is still difficult for us to choose aluminum alloy shutters. Here we will first…
အမှတ်အသားများ (Tags): aluminum billets, Aluminum Billets Manufacturers, Aluminum Billets Suppliers
အမှတ်အသားများ (Tags): Anodizing of Aluminum Profiles, Anodizing of Aluminum Profiles Manufacturers, Anodizing of Aluminum Profiles Suppliers
Why people like Thermal break aluminium door&ပြတင်းပေါက်?
အမှတ်အသားများ (Tags): Thermal Break Aluminium Door&ပြတင်းပေါက်, Thermal Break Aluminium Door&window ထုတ်လုပ်သူ, Thermal Break Aluminium Door&ပြတင်းပေါက်ပေးသွင်း
Intrudcing 6063 Industrial profiles, building profiles, irrigation pipes and extruded materials for vehicles, benches, ပရိဘောဂ, fences, စသည်တို့.
အမှတ်အသားများ (Tags): Aluminum Building Profiles, Aluminum Building Profiles Manufacturer, Aluminum Building Profiles Supplier
6063 Industrial profiles, building profiles, irrigation pipes and extruded materials for vehicles, benches, ပရိဘောဂ, fences, စသည်တို့. Industrial aluminum profile meaning English name, Aluminum Profile System, alias: industrial aluminum extrusion material, industrial aluminum alloy profile, industrial aluminum profile is an alloy material with aluminum as the main component, aluminum rods are…
အမှတ်အသားများ (Tags): လူမီနီယမ်ရှပ်တာပြတင်းပေါက်, Aluminium Shutter Window Manufacturer, Aluminium Shutter Window Supplier
How to chooseagood aluminium door&ပြတင်းပေါက်
အမှတ်အသားများ (Tags): aluminium door, လူမီနီယံတံခါး & Window, လူမီနီယံတံခါး & Window Manufacturers, လူမီနီယံတံခါး & Window Suppliers, aluminium window